Ngwa nke Polyacrylamide na ndị na-emepụta ihe na ndị na-ere ihe | Oubo
Polyacrylamideeme ihe na ntinye nke coal, ọla edo, ọlaọcha, ọla kọpa, iron, zinc, uranium, nickel, phosphorus, potassium, manganese na mineral ndị ọzọ na usoro ọgwụgwọ ọdụ. Isi nzube ya bụ iji melite arụmọrụ na mgbake ọnụego nke siri ike-mmiri mmiri nkewa; N'etiti ha, na ụlọ ọrụ na-ere ọkụ, na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme. na ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ ọla kọpa, ndị ọrụ sedimentation gbakwunyere site na thicker tupu nyo tank; na PH uru Na obere (ihe na-erughị 4) mmiri mmiri, dị ka lead-zinc ore, nke a na-eji dị ka ihe ndozi sedimentation, wdg;
Nhazi ihe nchịkwa
Industrylọ ọrụ Ngwuputa na-ere nnukwu mmiri maka:
(1) mainkpụrụ bụ isi nke ịsa mmiri na flotation bụ iji ọdịiche dị na anụ ahụ na nke kemịkal nke ihe ịnweta iji mee ka otu ma ọ bụ otu mineral na ore selectively itinye na egosipụta na ise n'elu n'elu nke ore , nke ga-aba uru mineral na-ekewapụ onwe ya na mineral. Ọtụtụ mineral dịka iron, coal, phosphate, zinc, uranium, sand, wdg na-eji usoro a. N'oge a, a flocculants mee ihe:
1. Iche mmiri site na gangue iji kwado mmeghari mmiri;
Dewatering a ụzọ sludge N'ịbụ nke gangue sedimentation;
-Ọ bụrụ na a kwụsịtụrụ mineral bara uru na mmiri, kewapụ ya na mmiri.
(2) N'oge usoro a, a na-agbaze mineral mineral n'oge ụfọdụ na acid ma ọ bụ alkali. N'oge a,
A na-eji flocculants agba mmiri ma kewaa adịghị ọcha na-adịghị edozi, a na-enwetakwa ọla n'ụdị hydroxides ma ọ bụ salts. A na- ejikarị flocculants na- flocculants eme ihe na acidic ma ọ bụ nnu dị ukwuu.
Mmiri ndị na-ata mmiri na mmiri na-agụnyekarị drainage, ọdụdụ slurry na nsị m. Enwere ihe ndị ọzọ kwụsịtụrụ n'ime mmiri mmiri, na tailings, na ọdịnaya nke mineral ndị a na-eri na obere ihe a kwụsịrị. Nkà na ụzụ ugbu a enwekwaghị ike ịkewapụ ọzọ wee bụrụ ọdụ ikpeazụ ọdụ mmiri mmiri. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị thickener gbakwunyere ọdụ ndị ahụ tinyere sludge dewatering filter press (dị ka belt filter press, plate and frame filter press, seramiki filter, wdg). Ihe siri ike a kwụsịtụrụ na-abụ achicha apịtị mgbe ndị na-ehichapụ ya na-edozi ya. Mmiri a na-asachapụta mmiri na-abanyekwa na usoro enyemaka ọzọ maka imegharị. Ọgwụgwọ usoro nke beneficiation tailings mmiri mmiri: Mgbe beneficiation wastewater na coagulated na inorganic flocculant, na ezi ahụ na kwụsịtụrụ solids coagulate n'ime a ubé ibu keadighi rarii urughuru nkwusioru, wee banye sedimentation tank mgbe flocculation mmeghachi omume na polyacrylamide flocculating precipitant, na sedimenti Mgbe ọ gafere na thickener na sedimenti ahụ, a na-agbapụta ụrọ ụrọ site na mgbapụta apịtị, a na-agbakwunye polyacrylamide ọzọ maka mmeghachi omume nke abụọ, wee banyezie nchịkọta nyocha (nke kachasị na-eji eriri igwe nyocha, nke na-arụ ọrụ nke ọma) maka nkewa mmiri-apịtị. Mmiri ahụ kewara ekewa na-abanye na sistemụ mgbasa yana apịtị apịtị maka mkpofu ma ọ bụ itinye n'ọrụ. Otutu mmiri ide mmiri na - eji polyacrylamide anionic nke nwere ihe dị nde 15 ma ọ bụ 18 nde maka ọgwụgwọ, ole na ole jiri polyacrylamide na - abụghị ionic nwere ihe dị ka nde 12. Kpụrụ nke polyacrylamide na ọgwụgwọ nke tailings mmiri mmiri: ogologo molekụla yinye nke polyacrylamide captures na adsorbs kwụsịtụrụ bekee mmiri n'ime keadighi rarii ahụ site na usoro dị ka adsorption bridging, net kpọọ, na electric neutralization. Nnukwu ihe nwere nnukwu ike ndọda nwere ike ịme ngwa ngwa na mmiri. Settọzi, iji mezuo mmetụta nke nkewapụrụ okwu na mmiri, nke abụọ bụ ijikọ irighiri ahịhịa iji jupụta oge nke abụọ iji mee ka flocs buru ibu, si otú ahụ na-abawanye arụmọrụ ọrụ nke igwe nyocha.